Sarri oo si Saaxi ah ula hadlay Morata – Gool FM
(London) 10 Dis 2018. Tababare Maurizio Sarri ayaa safka shaxdiisa oo dhan xitaa keydka ka saaray Alvaro Morata kulankii dhawaa ay 2-0 uga adkaadeen Manchester City.
Eden Hazard ayaa laga ciyaarsiiyay False 9 halka ay weerarka ku wehlinayeen xiddigaha dheereeya ee Pedro iyo Willian maadaama u Blues qorshaheedu ahaa inay ciyaarto counter-attack.
Shaki wayn ayaa la galiyay mustaqbalka laacibka oo awalba ku jiray qaab ciyaareed liita, balse macalinka reer Talyaani ayaa sheegay in laacibku uu weli mustaqbal ku leeyahay kooxda isla markaana uu fahmi karo in sababtii looga saaray safka ay ahayd qaab farsamo.
“Waxaan aaminsanahay inay wax caadi ah tahay, waxay ahayd dooqa kulan ceynkaa oo kale ah,” Sarri ayaa sidaa ku waramay.
“Ma garanayo haddii aan kulanka Brighton ku sii ciyaari doono shaxdan iyo inkale, laga yaabee inaynaan ku ciyaari doonin. Ma garanayo. Waxaan aaminsanahay in Morata uu fahmi doono inay ahayd go’aan farsamo oo kaliya, ma ahan Dooqa kama dambeysta ah oo ay kooxdu ku ciyaari doonto.
“Waxaan aaminsanayn shalay in markii ugu horreysay kal ciyaareedkan ay jirto suuro galnimada aan ku helno masaaxo badan, sidaa darteed waxaan doonay inaan isku dayno Hazard, maxaa yeelay markii ugu horreysay waxaa jirtay suuro galnimada aan ku ciyaareyno counter-attack.
“Willian, Hazard iyo Pedro waa kuwa dhabtii ku haboon ciyaarayaha ceynkaa oo kale ah, sidaa darteed wuxuu ahaa dooq iska caadi ah, waxaana rumeysanahay inuu dhabtii yahay dooq fiican isla markaana laga yaabo inaan markale isku dayno Mustaqbalka, gaar ahaa kulamada qaar.”.